Alpha GPC အမှုန့် (28319-77-9) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / Nootropics အမှုန့် / Alpha GPC အမှုန့်
rating: SKU: 28319-77-9. အမျိုးအစား: Nootropics အမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာအာလဖ GPC မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (28319-77-9) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
alpha GPC အမှုန့်L-Alpha glycerylphosphorylcholine သို့မဟုတ် choline alfoscerate ဟုလည်းလူသိများသည်။ သဘာဝ nootropic သည်၎င်းကိုယ်တိုင်နှင့်အခြား nootropics နှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌အနည်းငယ်သာပါဝင်ပြီးသန့်စင်သောပဲပိစပ်ဓာတ်ပါဝင်သည့်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်သည်။
alpha GPC အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
alpha GPC အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: alpha GPC အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 142.5-143 °
မြှင့်တင်ရန်ဦးနှောက် function ကိုများနှင့်တစ်ဦးအပိုထပ်တိုးသံသရာအတွက် alpha GPC အမှုန့်
ကုန်ကြမ်းအာလဖ GPC အမှုန့်, L-အာလဖ glycerylphosphorylcholine, choline alfoscerate
ကုန်ကြမ်းအာလဖ GPC အမှုန့်
phospholipids ဇီဝြဖစ်တစ်ခုအလယ်အလတ်, ရော်အာလဖ GPC အမှုန့်ကိုအဓိကအားဖြင့်ဦးနှောက်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော choline ပို့ဆောင်အသုံးပြုပုံလျှင်မြန်စွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
alpha GPC အမှုန့်ဦးနှောက်အိုမင်းဆန့်ကျင်မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပါအဝင်အရေးပါသော nootropic ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပါဝင်သောကျယ်ပြန့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ, သွေးကြောနှောက်နှင့်လေဖြတ်ခြင်းတို့အပါအဝင်ရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့်အတူဆက်နွယ်အသက်အရွယ်-related မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်ပြပါပြီ။ ဒါဟာအစအာရုံကြော Anti-အိုမင်းစွမ်းရည်ရှိပြီးလေ့လာမှုများကြောင့်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်၏ကုသမှုအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒါဟာဆဲလ်အမြှေးပါးကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရန်နှင့်ခှနျအားစိုကျထုပြီးအလျင်အမြန်နာလန်ထူမြှင့်တင်ရန်နိုင်စွမ်းအပါအဝင်အဖြစ်ကောင်းစွာ Non-nootropic အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်။ အကြိုလေ့လာမှုများပြုလုပ်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောပါကင်ဆန်ရောဂါအဖြစ် neurodegenerative အခြေအနေများများအတွက်အလားအလာကုသမှုအဖြစ်ဝတ်ပြုမည်အကြောင်းနှင့်လည်းစိတ်ဓါတ်များ Enhancer ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုလိုတာကဟော်မုန်း dopamine များလွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန်, တစ်ဦး dopaminergic အဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သည်အခြားဖြည့်စွက်နဲ့ပေါင်းပြီးသိမ်းယူသောအခါမူကားများစွာသော nootropic အသုံးပြုသူများအတွက်, အာလဖ GPC အမှုန့်ရဲ့အစစ်အမှန်အစွမ်းသတ္တိကိုက၎င်း၏အလားအလာဂုဏ်သတ္တိများ၌တည်ရှိ၏။ ကုန်ကြမ်းအာလဖ GPC အမှုန့်ဦးနှောက်မှမရရှိနိုင်စေသည်အဆိုပါအပိုဆောင်း choline သိသိသာသာ racetams ၏သိမြင်မှုတိုးမြှင့်သက်ရောက်မှုများကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။ ဒါဟာအစ racetam nootropics နှင့်ဆက်စပ်အနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏တဦးတည်းသောအသေးအဖွဲပေမယ့်နှောင့်အယှက်ခေါင်းကိုက်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။
alpha GPC အမှုန့်ကအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကုသမှုများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ Gliatilin နှင့် Delecit အောက်မှာရောင်းရှိရာဥရောပအတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ US မှာကအစားအသောက်ဖြည့်စွက်စဉ်းစားသည်နှင့်တစ်ဦးဆေးညွှန်းမပါဘဲရရှိနိုင်ပါသည်။
alpha-GPC ၏တစ်ဦးစံသောက်သုံးသောအသုံးအများဆုံးတံဆိပ်ဆေးများသည်နှင့်အညီ, 300-600 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထိုးလေ့လာမှုပါဝါ output ကို (600 မီလီဂရမ်) မြှင့်တင်ရန် alpha-GPC သုံးပြီးထိုသူနှစ်ယောက်လေ့လာမှုများကြီးထွားဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုတိုးလာပါသေးတယ်နှင့်ဖွယ်ရှိအားကစားသမားများအတွက်ယူကောင်းတစ်ဦးထိုးဖြစ်ပါတယ်နှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။
သိမြင်မှုကျဆင်းလက္ခဏာတွေ attenuating အတွက် alpha-GPC ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်, အားလုံးနီးပါးလေ့လာမှုများကိုအသုံးပြုဖို့ 1,200 တစ်သောက်သုံးသော 400 မီလီဂရမ်သုံးခုဆေးများသို့ ခွဲ. နေ့စဉ် MG ။ ဒါဟာအနိမ့်ဆေးများသိမှတ်ခံစားမှုအကျိုးရှိမည်ဟုဘယ်လောက်မသေချာဖြစ်ပါသည်, သို့သော် 1,200 မီလီဂရမ်တသမတ်တည်းအကျိုးကျေးဇူးနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပုံရသည်။
ကြွက်လေ့လာမှုများ 300-600 မှာ alpha-GPC ပါးစပ်စားသုံးမိအထွတ်အထိပ်၏သက်ရောက်မှု 48-96 တစ်ခုခန့်မှန်းခြေလူ့ထိုး / ကီလိုဂရမ် Mg (နှင့်တစ်ဦး 150lb လူ့အဘို့, 3,272-6,545 နေ့စဉ် mg) ဖြစ်သည့် / ကီလိုဂရမ်, MG ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Alpha GPC အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
အဆိုပါအာဟာရ choline ၏သဘာဝအရင်းအမြစ်ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းစုစည်း form မှာဖြည့်စွက်အာလဖ GPC အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘုံအာလဖ GPC အမှုန့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာမကြာခဏဦးနှောက်ထဲမှာအလွန်အကျွံ choline ထုတ်လုပ်နေသည့်တစ်ဦးခေါင်းကိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်မူးဝြေခင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များ "biohacker" Dave Asprey အဖြစ်အချို့လူများက, သူတို့ choline အတွက်မြင့်နှင့်ပိုပြီးဟောဒီမှာသည့်အခါအရှင်ခေါင်းကိုက်ရဖော်ပြထားခြင်း။
ကုန်ကြမ်းအာလဖ GPC မှုန့်သည်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (ထိုဆွထံမှ) ရှုပ်ထွေးမှုများ, erythema နှင့်အိပ်မပျော်ကဲ့သို့သောအရာများပါဝင်သည်။ သို့သော်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေသော်လည်း, ဒီ nootropic မြင့်မားသောဆေးများမှာကောင်းစွာဒဏ်ခံကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ အဆိုပါ LD50 (ကတိုင်းတာခြင်းလူဦးရေ၏ 50% သေဆုံးဘယ်အရာကိုသောက်သုံးသောတွေ့မြင်ဖို့အသုံးပြု) 10k တစ်ထိုးကြွက်ဘို့ / ကီလိုဂရမ် (6800 ပေါင်လူတစ်ဦးအဘို့အ 150 ဂရမ်နှင့်ညီမျှ) MG ပြသထားတယ်။
တစ်ဦးကပိုပြီးပညာရှိလေ့လာမှု 1636 နှင့်ညီမျှတစ် 150 ပေါင်လူတစ်ဦးအတွက် MG တစ်သောက်သုံးသောနှင့်အတူ "အဘယ်သူမျှမလေ့လာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုအဆင့်ကို" ပြသခဲ့သည်။
အစဉ်အလာ nonstimulatory ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်လူသိများပေမယ့်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြည့်စွက် alpha-GPC နှင့်အတူသိမြင်ဆွသတင်းပို့လုပ်ပါ။
ဒီပကတိလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာပါဘူးပေမယ့်ဒါဟာ, (ကြောင့်က phospholipids ဖြစ်ခြင်းမှ) စုပ်ယူမှုများအတွက်အစားအသောက်ဖက်တီးအက်ဆစ်နှင့်အတူ alpha-GPC ယူသမ္မာသတိရှိသောဖြစ်နိုင်သည်။
L-alpha-glycerylphosphorylcholine (စ choline alphoscerate သို့မဟုတ် glycerophosphocholine အဖြစ်လူသိများ, များသောအားဖြင့် Alpha-GPC ဖို့ကိုတိုစေ) phospholipids င်တစ်ဦး choline ဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးကိုလျော့နည်းဖက်တီး acids.It နဲ့လက်ဆီသင်ဇီဝြဖစ်၏အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးလက်ဆီသင်မော်လီကျူးတစ်ခု choline လိုလားသူမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါသည် နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပါထည့်သွင်းသည့်အတွက် acetylcholine နှင့် phosphatidylcholine ကိုရန်ရှေ့ပြေးဖြစ်လူသိများသည်။
alpha-GPC အနီရောင်အသားထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုတစ်ရှူးတစ်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်မဲဆန္ဒနယ်အဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့် enzymatically ကြက်ဥထဲကနေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ရှိရာအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက် alpha-GPC ်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ် sources.Most ဖြည့်စွက်အတွက်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ပမာဏသာရှိရှားပါးသည်ဒြပ်ထားကြပါတယ် သို့မဟုတ်ဤပေါင်းစပ်နှင့်အရင်းအမြစ်မှပဲပုပ် lecithin.Due ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံလက်ဆီသင်တဲ့ semisynthetic ဆင်းသက်လာအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
alpha GPC အမှုန့်ကိုလျင်မြန်စွာပါးစပ်စားသုံးမှုပြီးနောက်ပုံမှန်အား 20-30 မိနစ်တည်းဟူသောဦးနှောက်ထဲမှာ acetylcholine နှင့် neurotransmission များ၏ပေါင်းစပ်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဤအချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းတစ်ဦးစိတ်ရွှင်လန်းအတွက်တိုး, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကိုပညာရှိတဲ့အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းစစ်အစိုးရနှင့် တွဲဖက်. တသမတ်တည်းအသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုမှု၏ပထမဦးဆုံး2ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကုန်ကြမ်းအာလဖ GPC အမှုန့်များ၏ဆိုးကျိုးများတိုးမြှင်အပြည့်အဝစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သိမြင်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။
alpha GPC ကုန်ကြမ်း Powder
alpha GPC အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ကနေ Alpha GPC အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို